Depioté Fanatera Login : manohana hatrany ny filoha Ravalomanana. – MyDago.com aime Madagascar
Depioté Fanatera Login : manohana hatrany ny filoha Ravalomanana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 12 octobre 2011 Catégories Politique
3 pensées sur “Depioté Fanatera Login : manohana hatrany ny filoha Ravalomanana.”
Ianareo ao @ HAT ve no matahotra ny fodian’i Dada dia izahay Vahoaka Malagasy izay tompon’ity Madagasikara ihany koa no hijaly mafy amin’ny fahalafosan’ny fiainana andavanandro. Ny fiverenany no antoky ny mahamora ny fiainanay sy ahazoana reconnaissance internationale dia aza sakanana izy hiverina eto fa sao dia mahazo tsiny amin’ny Vahoaka Malagasy ianareo.
lilinoi, ny tsotsoka mihintsy koa no mitady ny tsy fodian’i Dada.Ndao ary hanao SIT-IN sy RODOBE NSIONALY MIRINDRA satria 5 andro ny eo ny SADEC.
Marina mihitsy izany ry Bemafohy, tokony aseho an’ireo olon’ny SADEC tonga eto fa ny Malagasy ihany no masy mandidy amin’ny taniny, ny fiverenan’i Dada ihany no vahaolana amin’ny krizy, ny tsotsoka sy ny saribakoliny no vato misakana amin’ny fiverenan’ny fiandrianam-pirenena. Ka inona moa no tokony tsy anaovana SIT-IN sy RODOBE NASIONALY izay voalazanao, raha manakana izany ny HAT amin’ny alalan’ny basy dia tratra eo ny famoretany ataony amin’ny Vahoaka.
Précédent Article précédent : Dep José : Fitondrana mpangalatra fiarakodia ny FAT: ny 4*4n’ ny Unicef, 4*4n’ ny depioté.
Suivant Article suivant : Fampisehoan-kery teny Ivato : tafita ny hafatra